‘बेबी सावर’ मा रमाउदै बो-ल्ड अभिनेत्री प्रियंका, कहिले जन्मिन्छ बच्चा? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/‘बेबी सावर’ मा रमाउदै बो-ल्ड अभिनेत्री प्रियंका, कहिले जन्मिन्छ बच्चा?
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले ‘बेबी सावर’ गरेकी छिन् । प्रियंकालाई उनका सथिहरुले ‘बेबी सावर’ पार्टी दिएका हुन्। बेबी सावर सामान्यतय गर्भवती महिला सात देखि आठ महिना पुगेपछि केहि नजिकको साथीहरु र परिवारको सदस्य उपस्थित भएर मनाउने गरिन्छ। नेपालमा भने गर्भवती महिला सात देखि आठ महिना पुगेपछि ‘दही-चिउरा’ खुवाउने चलन थियो। तर पछिल्लो समय यो चलन नेपालमा पनि भित्रिएको छ।